Esikhathini esingeside esidlule, abathengi Russian abajwayelene ikiwi, kodwa lesi sithelo imzuzele ngokushesha ukuthandwa. Lokhu kungenxa yokungabikho ukunambitheka kwako obucayi, kuyinto isiphambano phakathi strawberry kanye gooseberries, kanye izakhiwo ewusizo emimoya lesi sithelo.
Pretty abasha yobudala ikiwi - izithelo engavamile, lisuselwa encazelweni esimila Ornamental ngenxa yokuzalanisa isayensi. Yande kwaba kuphela nekhulu lama-20, njengoba nje iye cishe zonke izimfanelo okwesikhathi ukudayiswa uphumelela amanga isikhathi eside, ngempumelelo ithwala ezokuthutha hhayi kakhulu fastidious zinakekelwe okhulayo.
Ukuze sithole ripeness ka ikiwi izithelo kudingeka cabaza kancane ngomunwe wakho. izithelo ezivuthiwe kuyoba soft, kodwa hhayi kakhulu (okuningi esithambile futhi - vele overripe izithelo). Kulokhu, uma izithelo akusilo sesivuthiwe, kungenziwa abeke isikhathi esithile on endaweni evundlile, futhi kancane kancane ufinyelela esimweni oyifunayo. Isitolo ikiwi avuthwa (izithelo ukuthi spoilt isikhathi eside) kungaba emasontweni ambalwa in the esiqandisini.
Ngokusho okuqukethwe vitamin C kiwi kwasekuqaleni. Lokhu kusho ukuthi ekwindla kanye entwasahlobo, lapho umzimba uchayeke kakhulu izifo, kubalulekile ukuba singakhohlwa ngalesi sithelo, njengoba nje nezinye izithelo naphakathi ezimbili kuphela iqukethe inani lansuku zonke i-Vitamin umuntu omdala. Futhi nazi izinto avumela okukhipha nosawoti emzimbeni, ngcono ukugaya bese ninamathele amafutha.
Ukuba khona kule kiwi Vitamin E, okuyinto ine impahla antioxidant, okwenza lesi sithelo ewusizo ukwenza isikhumba bobusha futhi izinwele enempilo kanye nezinzipho. Okuqukethwe amavithamini B6 futhi B9 kwelinye umkhiqizo siyindlala, ngakho ikiwi, lapho basuke equkethwe, eyingqayizivele ngezinhlobo zayo. Kuyaphawuleka ukuthi amavithamini B abaluleke kakhulu kubantu besifazane abakhulelwe.
Kiwi izithelo kudliwa ikakhulu eluhlaza. Nokho, zikhona izindlela eziningi lesi sithelo, ezisukela ukupheka inyama kophudingi.
Ngokwesibonelo, i-izithelo isaladi ne kiwi Njengabantu abadala, izingane ngisho izivakashi abeza ngokungalindelekile. Ukuze wenze lokho, udinga ukuthatha ikiwi, ama-aphula, ama-orentji kanye nezinye izithelo ukuthi kukhona in the esiqandisini. Lisikiwe ikiwi tincetu kanye asele izithelo tincetu, kufanele uhlanganise ndawonye, ugcwalise nge ophehliwe (kungaba ithathe ukhilimu omuncu) bese wengeza noshukela ukunambitha. Lokhu isaladi akuyona kuphela yokuqala kodwa futhi enemibala ukuhlobisa itafula, futhi iqukethe inombolo enkulu ngokungavamile izakhi. Lokhu dish kuyoba ebaluleke kakhulu ithebula iholide yezingane.
Enye dessert, okuyinto ungasebenzisa le izithelo - a ikhekhe nge kiwi nobhanana. Esikhathini kulungiselelwa lokhu isidlo ungakwazi zizame inhlama ukhilimu. Kodwa kumelwe wazi ukuthi ukhetho engcono kungaba inhlanganisela yalezi izithelo nge amaprotheni ukhilimu futhi isipanji ikhekhe.
Mangisho ukuthi ngaphezu izithelo salads kanye nama-dessert, ikiwi izithelo ingasetshenziswa inyama izitsha kanye salads nge imayonnaise. Lokhu kuyokunika elikhuhluziwe isidlo futhi ukunambitheka engavamile. Lapho ekulondolozeni izithelo azigcina eziningi amavithamini, ngokungafani nabanye abaningi ukuthi ukunciphisa izakhiwo zalo ezibalulekile ekulondolozweni cishe isigamu.
Ngakho, okuqukethwe eliyingqayizivele kwezakhi kwenza ikiwi omunye ewusizo kakhulu izithelo ezingavamile. Futhi lapho ucabanga ukuthi inkathi nokuvuthwa kwenzeka ekwindla, lapho izithelo evamile esekhulile eRussia, siyaphela kancane kancane kusukela emashalofini, le ikiwi kungaba nje elibalulekile ukuze ngenzele ngisho kakhulu ngenxa yokuswela amavithamini ebusika kanye entwasahlobo. Uma sinezela le ukunambitheka engavamile kodwa emnandi, ngaleso sikhathi singaqonda ukuthi kungani yena uyathandwa.